कोशी अस्पताल – Himalaya Television
कोशी अस्पतालमा एक जनाको मृत्यु, कोरोना परीक्षण हुँदै
२० साउन, २०७७ विराटनगर । कोशी अस्पताल विराटनगरमा उदयपुरका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । स्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि राती अस्पताल पुर्याइएका उनको मृत्यु भएको कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दासले जानकारी दिनुभयो । विराट नर्सिङ होममा आएका...
कोशी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु, मृत्यु हुनेको संख्या ५८ पुग्यो
१९ साउन, २०७७, विराटनगर । विराटनगरमा सोमबार कोरोना संक्रमित एक पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । विराटनगर ५ का ७७ वर्षीय पुरुषको कोसी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । कोसी अस्पतालका चिकित्सक डा. दिपक सिग्देलका...
कोशी अस्पतालका चिकित्सक र नर्सलाई अन्य स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न रोक
१३ साउन, २०७७, मोर । कोशी अस्पताल प्रशासनले त्यहाँका चिकित्सक र नर्सलाई अन्य स्वास्थ्य संस्था र क्लिनिकमा काम गर्न रोक लगाएको छ । कोशी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र नर्सले क्लिनिक, अस्पताल र नर्सिङ होममा पनि काम गर्दै आएका थिए...